Computer Technical Notes & Sharing Softwares: October 2009
SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်း
Injection နဲ့ပက်သက်တဲ့အပိုင်းကို အတွေ့အကြုံ မရင့်ကျက်သေးတဲ့သူတွေ၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးတဲ့သူတွေပါ နားလည်နိုင်အောင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင်နဲ့ နဲနဲလောက် Tutorial တစ်ခုအဖြင့်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ SQL injectiong နဲ့ပက်သက်တဲ့ Tutorial တွေကို Google မှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါက တောင်လိုပုံနေပါတယ်။ အားလုံးကတော့ အတူတူပါပဲ... SQL injector တွေဖြစ်စေရန်တစ်ခုအတွက်မဟုတ်ပဲ SQL Injection နဲ့အတူ php နဲ့ mysql functions လေးတွေကို သိကာ security ပိုင်းကို ထိန်းသိန်းကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ Computer ဝေါဟာရကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရတာ နဲနဲတော့ နားရှုပ်သွားနိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။ SQL Injection ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ အခြေခံ Web Developement ပိုင်းအခြေခံရှိဖုိ့တော့လိုပါလိမ့်မယ်.. ဒီ tutorial အတွက် လိုအပ်တာကတော့ php နဲ့ sql အကြောင်းသိထားရင် နားလည်လောက်ပါတယ်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ... Database ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် Database ဆိုတာ အချက်အလက် Data တွေစုစည်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Application တစ်ခုပါပဲ... Application Programming Interface (API) တွေကို တည်ဆောက် အသုံးပြုမယ် ထိန်းသိမ်း သိမ်းဆည်းထားမယ်။ Database(DB) servers တွေဟာ Web development လုပ်ငန်းတွေ နဲ့လည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက် ၄င်းအထဲက data တွေကို ထုတ်ယူအသုံးပြု၊ ကြည့်ရှု့ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Database အထဲမှာ usernames, passwords စသည် တွေလို အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း သိမ်းဆည်းနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Database ရဲ့ လုံခြုံရေးဟာလည်း အလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းမှု ညံ့ဖျင်းတဲ့ database တစ်နည်းအားဖြင့် အမှတ်တမဲ့ဖြစ်စေ၊ သတိမမှု၍သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် programmer တွေရေးသားထားတဲ့ code တွေရဲ့ လွဲမှားမှုတွေ ကြောင့် ဒီလိုဟာကွက်တွေ ဖြစ်ပေါ်ကာ database ထဲကို အခြား တရားမ၀င် ၀င်ရောက်သူတို့အား လမ်းဖွင့်ပေးသလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ DB servers တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာ ဒါလေးတွေက အသုံးများတာလေးတွေပါ။
SQL injection ဆိုတာကတော့ ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အဖြစ်အများဆုံး web application အမှားဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း web application အမှားတစ်ခုမှနေ၍ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်အသုံးပြုသူတွေ (Hackers) က မိမိတို့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် SQL injection ဆိုတာ web or db server တို့ရဲ့ အမှားကြောင့်မဟုတ်ပဲ အတွေ့အကြုံမဲ့၊ အရေအချင်း ညံ့ဖျင်းတဲ့ programming ရေးဆွဲသူတွေကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက အဝေးတစ်နေရာကနေ application, web server ကို အလွယ် ကူဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ SQL injection မှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးသော SQL commands တွေ နဲ့ web page ကနေ အမျိုးမျိုးသော data တွေကို ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က Company တစ်ခုရဲ့ Network တစ်ခုကိုဝင်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင် port scanner တွေနဲ့ sanner ဖတ်ပြီး အမှားတွေနဲ့ ပွင့်ဟနေတဲ့ port ကနေ ၀င်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Web Server (Host Sever) တစ်ခုက port 80 လောက်ပဲဖွင့်မယ်၊ တစ်ခြား security ပိုင်းတွေ ပေးထားမယ်ဆိုရင် port scanner ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ၀င်ရောက်ဖို့ခက်သွားပါလိမ့်မယ်( ခက်ခဲနေမယ် )... ဒါဆိုရင် Web Hacking ကို ဦးတည်ပြီးပြောင်းကြည့်ရပါလိမ့်မယ်... Web Hacking လို့ပြောရင် တော်တော်များများကတော့ SQL Injection ကိုပထမဦးစွာပြေးမြင်ကြမှာပါပဲ... ဟုတ်တယ်လေ.. SQL Injection ကတစ်ခြားဘာမှမလိုဘူး Web Browser တစ်ခုပဲလိုတယ်...
Site တွေမှာ username, password တွေနဲ့ login ၀င်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ site အထဲမှာ ရှိတဲ့ content တွေကို မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သူ (username & password ရှိထားတဲ့သူ) တွေကိုသာ ကြည့်ရှုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာပါ။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေက username & password မရှိပဲ ရှိသကဲ့သို့ ၀င်ရောက်အသုံးပြုမယ် (user registration မလုပ်ပဲ ၀င်ရောက်တယ်) ဆိုရင် ဒါကို BYPASSING LOGINS လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ programmer ရဲ့ login မှာစီစစ်မှု မသေချာလို့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ User name နဲ့ Password ကိုမသိပဲ login ၀င်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် username က admin ဖြစ်ပြီး password က 12345 ဆိုကြပါစို့... ဒါဆိုရင် SQL query က
SELECT USER from database WHERE username='admin' AND password='12345' ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..... အကယ်၍ အပေါ် SELECT command တန်ဖိုးက မှန်တယ်ဆိုရင် site ထဲကို ၀င်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အထက်ပါပြောခဲ့သလို programmer က login မှာမှန်ကန်တဲ့စီစစ်မှုမရှိရင် Hacker တွေက အောက်ပါအတိုင်း ၀င်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
1=1 က အမြဲတန်း query ကို true ဖြစ်စေပြီး OR ကတော့ query တစ်ခုက true ဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားတစ်ခုကိုလည်း true ဖြစ်သွားစေပါတယ်ဒါကြောင့် 'a' ဆိုတဲ့ user ဟာ DB မှာမရှိတောင်မှ ဒီ query က true ဖြစ်ကာ site admin ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်... ဒီလိုနည်းနဲ့ Vulnerable ဖြစ်တဲ့ site တွေအတွက် အောက်ပါအတိုင်း စမ်းစစ်နိုင်ပါသေးတယ်...
SQL injection က အခုလို bypassing logins တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ DB servers ကနေ လျို့ဝှက်စွာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Data တွေကို ရယူနိုင်ပါတယ်... အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နဲနဲလေး အထူးဂရုပြုပြီးတော့ လေ့လာကြည့်ပါ။ အောက်ပိုင်းမှာ လက်တွေ့စမ်းလို့ရအော် site link နဲ့ တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
id variable assign လုပ်ထားတဲ့ နောက်နားက ' (apostrophe) လေးတစ်ခုကို ထည့်လိုက်ပါမယ်..
အကယ်၍ ၄င်းရဲ့ site က vulnerable မဖြစ်ဘူးဆိုရင် ပုံမှန်အတိုင်း page loading လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်..
အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ query string filtering မရှိဘူးဆိုရင် "MySQL Syntax Error By '5'' In Article.php on line 15." သိုမဟုတ် Check the correct MySQL version သို့မဟုတ် MySQL Fetch error သို့မဟုတ်ပါက ဘာမှမပေါ်ပဲ page အဖြူကြီးသာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်... ဒါဆိုရင် ဒီ site က vulnerable ဖြစ်နေပါတယ် အကယ်၍ ' ဖြင့် မရလျှင် အောက်ပါအတိုင်း union select 1-- ဆိုတာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆိုရင် နောက်က ' (apostrophe) လေးထည့်ပြီးစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီ <FORM></FORM> နှစ်ခုကြားက ဖြစ်နိုင်ခြေတွေပါ။
<input type=hidden name=A value='a' or 1=1--">
URL query ကိုအောက်ပါတိုင်း ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်... '/*' သို့မဟုတ် '--" ဆိုတာလေးသုံးလို့ရပါတယ်..
အမှားမပေါ်ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ခါ2ဆိုပြီးတိုးကာ ရိုက်ထည့်ပါမယ်
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Columns နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သိသွားပါပြီ... ဒီလိုနည်းနဲ့ Column တွေကို တစ်ဆင့်ခြင်းရှာဖွေရပါတယ်...
နောက်တစ်ခု ပုံနဲ့ တကွ ရှာဖွေကြည့်ရအောင်
http://sbisa.org/circle.php?id=26 ရဲ့ value နောက်မှာ ' ဆိုတဲ့ (apostrophe) တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်..
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is notavalid MySQL result resource in /home/sbisaor/public_html/circle.php on line 10 ဆိုတဲ့ error တစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်..
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 order by 1,2,3,4,5,6-- ဒီအထိအဆင့်အဆင့်ရှာတယ်... error မဖြစ်သေးဘူး
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,2,3,4,5,6-- ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်..
အခု @@version ကို data တွေသိမ်းဆည်းထားတဲ့ column မှာထည့်ပြီး MySQL version ကိုစစ်မယ်..
ဒါဆိုရင် Server မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ MySQL ရဲ့ version ကိုဖော်ပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်...
---MySQL5နှင့်အထက် injection---
နောက်ထက်တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ Columns တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
ဒါဆိုရင် DB ထဲက table တွေကို ဖော်ပြပေးပါပြီ... အခု ကျွန်တော်တုိ့ဒီ tables လေးတွေကို စနစ်တကျ မှတ်သားထားပါမယ်... နောက်တစ်ဆင့်တက်ကာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ user name နဲ့ password တွေ သိမ်းထားတဲ့ table ကိုကြည့်ပါမယ်...
group_concat ကိုပဲ ဆက်လက်သုံးပါမယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ username, password တွေသိမ်းထားလောက်တဲ့ columns တွေထဲက စစ်ထုတ်ယူမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ မှန်းထားတဲ့ table အမည်ကို from information_schema.tables where table_schema=database-- နေရာမှာ ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်..
တစ်ချို့ကတော့ password hashed လုပ်ထားတဲ့ အတွက် ၄င်းတို့အား hash cracker တွေနဲ့ ဖြေထုတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်..
hash လုပ်ထားတဲ့ password တွေသာဆိုရင်တော့ အနည်းငယ်ခက်သွားပါလိမ့်မယ်... အထက်ပါ hash ကို crack လုပ်လိုက်ရင် admin:PlanetCreator ဆိုပြီးရပါမယ်..
ဥပမာ ကျွန်တော်က table name ကို user ဆိုပြီး ခန့်မှန်းလိုက်မယ်.. ဒါဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းရိုက်ထည့်ပေးကြည့်မယ်ဆိုပါစို့
အထက်ပါအတိုင်းရိုက်ထည့်လိုက်လို့ error ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ table မရှိလိုပဲ... နောက်တစ်ခါထပ်ပြီး guess လိုက်ပါ... table name ကို tbluser ဆိုပြီးထားလိုက်ပါမယ်..
ဒီလိုနည်းနဲ့ table name တွေ column တွေအား ခန့်မှန်းပြီးထည့်သွားရပါလိမ့်မယ်...
ဒါဟာ Injection ရဲ့ လျို့ဝှက်ထားတဲ့ Data များကို ရယူတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်... Admin ရဲ့ username & password ရပြီဆိုရင် Admin Login Page မှာရိုက်ထည့်ရပါမယ်... Joomla ဆိုရင် /administrator နဲ့ Wordpress ဆိုရင် /wp-admin ဖြစ်ပါတယ်.. အချို့ site တွေက admin panel ကိုရှာရခက် နေပါလိမ့်မယ်.. ဒါဆိုရင် admin panel finder လေးတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရပါလိမ့်မယ်...
(table name နဲ့ column တွေက အထက်ပါအတိုင်းရှာဖွေက ထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်)
သတ်မှတ်ထားတဲ့ page ပြောင်းလဲပြီး update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်ပေးရပါတယ်..
သတ်မှတ်ထားတဲ့ page ကို delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါ table name ရဲ့ နောက်ထဲမှ WHERE နဲ့ page id ကိုထည့်သွင်းသွားရပါမယ်...
ဒီအတိုင်းဖျက်ရင် table တွေကော အထဲမှာပါတဲ့ contents တွေကော အားလုံး ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်...
Server အထဲက .htaccess, .htpasswd တွေနဲ့ password files တွေဖြစ်တဲ့ etc/passwd စသည့် ဖိုင်တွေကို ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ LOADFILE ကိုသုံးရပါတယ်... ဒါကအသုံးတော့နည်းပါတယ်....
ဒါဟာ server ရဲ့ c:\_boot.ini ကို ဆွဲယူပေးပါလိမ့်မယ်..
Posted by SLIP at 2:27 PM0comments
am now posting this UD Crypter to bypass antivirus detection. We have discussed about Cybergate RAT and Keylogger in my previous articles. But, the problem with these hacking softwares is that they are detected by antiviruses on victim computer. Thus, they are mostly deleted by victim antivirus and hence, we are unable to complete our hack. So, to prevent any such detection, use this UD Crypter. I have provided link for software download... just read on.
Well, if you are not knowing about Crypter and how crypters work, I have explained all the basics of crypter. Once you've read that article, proceed to the further section.
How to Bypass Antivirus detection:
1. Free Download UD Crypter to bypass antivirus detection. The file is password-protected.
82 37 58 B5 07 1F 1F C7 BD 34 60 10 55 17 0C F8 EE 7D 3C B4 6C B3 AE 2C 73 14 AA 67 C3 EC 83 F4 7F 32 42 CC 76 3B FF 9F 81 62 24 55 1A 49 FB 4A 74 7D 74 C1 1C 27 23 C7 F9 07 2D 28
Encryption Order: Tripo 5-Megan 35-Reverse-RC4 (Key: techotoys)
Sorry friends, I have to encrypt the password. To keep this Crypter UD, it is necessary to prevent any noob from getting access to it. I am gonna post my next article on How to decrypt passwords to help you in decrpting such passwords.
2. I am gonna try this Crypter on Cybergate server.
3. Now, run Twinkle Crypter.exe (works perfectly on Windows XP and Windows Vista) on your computer to see:
4. Hit on Browse and select the Cybergate server created in step 2. Hit on Generate 2-3 times to get random pass. Now, click on "Build" and crypter server named "New.exe" will be created.
5. Run New.exe on your computer. You will find this "New.exe" doing same function as "server.exe".
6. Go to NVT scanner site and scan this "New.exe" file. While scanning, hit on Browse and select the file "New.exe". Check "Do not distribute the sample" and hit on Submit.
Currently, this crypter is 2/16 UD, but not FUD. Pretty useful in evading most antiviruses.
Very soon, I will be postingaFUD Crypter. Till then, try out this UD Crypter. I have tried this crypter with most keyloggers and RATS and has worked with most of them. Fortunately, it is not corrupting our servers.
So friends, this is all about making your virus undetectable to antivirus. Thus, this UD Crypter will help you to bypass antivirus on victim computer. If you have any problem in using this UD Crypter to bypass antivirus, please mention it in comments.
Found this crypter working with your server??? Tell us about it in comments. Your comments are awaited.
Enjoy UD Crypter to bypass antivirus...
Posted by SLIP at 4:47 AM0comments